‘भाडा तिरीसकेपछि मुढामा बसाएर यात्रा गराउँन पाइन्छ ? बस छुट्ने समय फिक्स हुनु पर्दैन ?’ (भिडियो सहित) – पुरा पढ्नुहोस्……
‘भाडा तिरीसकेपछि मुढामा बसाएर यात्रा गराउँन पाइन्छ ? बस छुट्ने समय फिक्स हुनु पर्दैन ?’ (भिडियो सहित)
यातायात व्यवसायीको सिण्डीकेट विरुद्ध सरकार जसरी प्रस्तुत भैरहेको छ त्यसलाई स्वागत गर्न अलिकती पनि कञ्जुस्याई गर्न हुँदैन । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले विभिन्न कार्यक्रम सार्वजनीक गरेपनि सरकारले आफ्नो निर्णयबाट पछि नहट्ने दृढता देखाइरहेको छ ।
यातायात व्यवसायीहरु प्राय प्रश्न गर्नुहुन्छ, सिण्डीकेट भनेको के हो भनेर । आज आम सर्वसाधारण जनताले बुझ्ने गरी यस बारे कुरा गर्न चाहन्छु । १ किलोमिटर यात्रा तय गर्न १५/२० मिनेट कसरी लाग्छ ?
बस पार्क पुग्न साथ ४ जनाले ४ तिर तान्छन्, यो के हो ? भाडामा एकरुपता चाहिदैन ? यति दुरीको यती भाडा भनेर बकाइदा लेख्नु पर्दैन ?
अनि भाडा तिरीसकेपछि मुढामा बसेर यात्रा गराउन पाइन्छ ? कुन युगमा छौँ हामी बस छुट्ने टाइम फिक्स हुनु पर्दैन ?
सरकारलाई चाहिए हप्ताको एक दिन एउटा बस म पनि चलाउन सक्छु, जाँच लिनुहोस् पास भए भने बसको लाइसेन्स दिनुहोस् । सबैै खाले सिण्डीकेटको विरुद्ध हामी सबै भन्दा अघि उभिन तयार छौँ ।
Prevआगोले जलेर नष्ट भएको प्रदीपको घर कोरियामा रहेका युवाले बनाइदिने
Nextघुस खानेको च्यालेन्ज स्विकार्दै रविको टीम गोरखा, माफि माग्दै फिर्ता गरे,कसले तिर्‍यो रोशनाको बिल ? (हेर्नुहोस भिडियो सहित)
आज डलरको भाउ बढ्यो। हेर्नुहोस साउदी, कतार दुबई,मलेसिया लगायतका मुलुकको मुद्राको दरभाउ यस्तो छ।